Bachongelwe ukumel'izwe kwakhona - HeraldLIVE
Latest: Artist’s life ruined after home attack
‘Focus on strong values, not race’
The Algoa Sun Bachongelwe ukumel’izwe kwakhona January 25, 2014
ABADANISI ababini abantsundu baseBhayi baphinde bazenza ibhongo lesizwe ngokuthi bachongelwe ukuya kumela uMzantsi Africa kukhuphiswano oluza kube luqhutyelwa Engilane kulenyanga Izayo.
Ababini base NU2 u-Maqocwandile Cuba ominyaka oyi-13, kunye no-Amile Skepe (12) abadanisela i-Ndoni Dance Academy ngabo abaza kuntingela eNgilane kulo mnyhadala womdaniso owaziwa njenge Junior Black Pool Dance Festival.
Abaqali ukugqwesa, kuba nangonyaka ophelileyo yayikwa ngabo e-Paris nalapho babe kwamele izwe labo kukhuphiswano lwe-Dance Council.
“Kulonyaka siyaphinda kwakhona siya Engilane, kwaye ndiyavuya kakhulu ukufumana ithuba lokubona amazwe ngamazwe. Ngoku siyawazi umgangatho welacala, sinethemba lokuba noko siza kuzama simele into yethu,” utshilo u-Cuba.
Iqela lomdaniso iNdoni Dance yasekwa ngu-Thembinkosi Ndoni, ngo-2002, isungulwa ngamalungu amashumi amane anesihlanu. Kungoku nje octleliqela limalungu amashumi amane anesibi.
“Kubaluvuyo kum ukubona ukuba noko umahluko ndiyawenza ekuhlaleni, kwaye ne-Academy yam iyakhula. Nangoku sibanazo ne-workshops kwizikolo zalapha e-Motherwell, sifundisa abantwana indidi ngeendidi zomdaniso,”utshilo u-Ndoni.
Nangona bewahambile amazwe aliqela, kambe enye yengxaki abaye bahlangabezane nazo yimali, ngoba ukuhambela kulamazwe kuyabiza kanobom.
“Singavuya kakhulu ukufumana inkxaso ebantwini, athi onako alahle obo buncikane anobo kwibhanka i-Nedbank phantsi kwe-Ndoni Dance Art Academy, inombolo ye-account ithi 1016994354 i-branch code ithi 12122009. Sicela okwaziyo ukusinceda asixhase,” utshilo u-Ndoni.
TodayClearHigh 26°/Low 14°0%TomorrowClearHigh 19°/Low 14°20%SundayPartly CloudyHigh 19°/Low 13°20%MondayClearHigh 26°/Low 17°10%	Currency	Recent Posts	Artist’s life ruined after home attack